ကြွေလွင့် သွားတဲ့ သူရဲကောင်း အာဇာနည်တွေကို ဂုဏ်ပြုရင်း Flower Strike လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ နော်ဖောအယ်ထာ….. – Cele Snap
ကြွေလွင့် သွားတဲ့ သူရဲကောင်း အာဇာနည်တွေကို ဂုဏ်ပြုရင်း Flower Strike လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ နော်ဖောအယ်ထာ…..
April 3, 2021 By Ju Ry Celebrity
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ နော်ဖောအယ်ထားကတော့ ခုလက်ရှိ အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူထဲကပြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ရရာနေရာကနေ တတ်နိုင်သလောက် လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့သလို လိုအပ်တာတွေကိုလည်း လှူဒါန်းပေးလျက်ရှိတာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။အချိန်အားဖြင့် နှစ်လပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဒီလူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကတော့ အသက်ပေးသွားကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေလည်း တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်တိုးနေခဲ့သလို ခုဆိုရင် ကလေးငယ်လေးတွေပါ ကြွေလွင့်ခဲ့ရပြီဖြစ်တာကြောင့် ပြည်သူအားလုံးက နှမျောတသစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိတာအမှန်ပါပဲနော်။
ပည်သူအားလုံး ကလည်း နိုင်ငံအတွက်အသက်ပေး သွားရှာတဲ့ အာဇာနည်လေးတွေ ကို ဆုတောင်းပေးခြင်းတွေ အဆက်မပြတ်လုပ်ပေးနေကြသလို အနုပညာရှင်တွေကလည်းကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေကိုအားပေးနှစ်သိမ့်ရင်းကူညီမှုတွေလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျရောက်တဲ့ ဧပြီ (၂) ရက်နေ့မှာဆိုရင်လည်း အသက်ပေးသွားကြတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အတွက် နေရာအနှံအပြားရဲ့ လမ်းမတွေမှာပန်းစည်းတွေချပြီး ဝမ်းနည်းကြောင်းဖော်ပြရင်း ဂုဏ်ပြုပေးကြတဲ့ Flower Strike လှုပ်ရှားမှုလေးကို ပြည်သူအားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။
နော်ဖောကလည်း ဒီလှုပ်ရှားမှုလေးမှာ ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပန်းလေးတွေနဲ့ အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကို ဆုတောင်းဂုဏ်ပြုပေးနေတဲ့ပုံလေးတွနဲ့အတူ ” ကျဆုံးပြီးသော ပြည်သူ့ သူရဲကောင်းများကို ဦးညွတ်လျက်!!!အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် “ဆိုတဲ့စာလေးကိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက်နော်ဖောရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Source & Photo Credit : Naw Phaw Eh Htar Facebook Page
ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ နျောဖောအယျထားကတော့ ခုလကျရှိ အခွအေနတှေနေဲ့ပတျသကျပွီး ပွညျသူထဲကပွညျသူတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ ရရာနရောကနေ တတျနိုငျသလောကျ လှုပျရှားမှုတှမှော ပါဝငျခဲ့သလို လိုအပျတာတှကေိုလညျး လှူဒါနျးပေးလကျြရှိတာ တှမွေ့ငျရပါတယျ။အခြိနျအားဖွငျ့ နှဈလပွညျ့ခဲ့ပွီဖွဈတဲ့ ဒီလူထုလှုပျရှားမှုကွီးကတော့ အသကျပေးသှားကွတဲ့ သူရဲကောငျးတှလေညျး တဈရကျထကျတဈရကျတိုးနခေဲ့သလို ခုဆိုရငျ ကလေးငယျလေးတှပေါ ကွှလှေငျ့ခဲ့ရပွီဖွဈတာကွောငျ့ ပွညျသူအားလုံးက နှမြောတသစိတျမကောငျး ဖွဈမိတာအမှနျပါပဲနျော။
ပညျသူအားလုံး ကလညျး နိုငျငံအတှကျအသကျပေး သှားရှာတဲ့ အာဇာနညျလေးတှေ ကို ဆုတောငျးပေးခွငျးတှေ အဆကျမပွတျလုပျပေးနကွေသလို အနုပညာရှငျတှကေလညျးကနျြရဈသူမိသားစုတှကေိုအားပေးနှဈသိမျ့ရငျးကူညီမှုတှလေညျးပွုလုပျပေးခဲ့ကွပါတယျ။ဒီနမှေ့ာကရြောကျတဲ့ ဧပွီ (၂) ရကျနမှေ့ာဆိုရငျလညျး အသကျပေးသှားကွတဲ့ သူရဲကောငျးတှေ အတှကျ နရောအနှံအပွားရဲ့ လမျးမတှမှောပနျးစညျးတှခေပြွီး ဝမျးနညျးကွောငျးဖျောပွရငျး ဂုဏျပွုပေးကွတဲ့ Flower Strike လှုပျရှားမှုလေးကို ပွညျသူအားလုံး ညီညီညှတျညှတျပွုလုပျခဲ့ကွတာတှရေ့ပါတယျ။
နျောဖောကလညျး ဒီလှုပျရှားမှုလေးမှာ ပါဝငျခဲ့တာဖွဈပွီး ပနျးလေးတှနေဲ့ အာဇာနညျသူရဲကောငျးတှကေို ဆုတောငျးဂုဏျပွုပေးနတေဲ့ပုံလေးတှနဲ့အတူ ” ကဆြုံးပွီးသော ပွညျသူ့ သူရဲကောငျးမြားကို ဦးညှတျလကျြ!!!အရေးတျောပုံအောငျရမညျ “ဆိုတဲ့စာလေးကိုဝမြှေခဲ့ပါတယျ။ပရိသတျကွီးအတှကျနျောဖောရဲ့ ပုံလေးတှကေို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ကျဆုံး သွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ အတွက် ပြုလုပ်သော Flower Strikeလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သန္တာလှိုင်…..
အစစအရာရာ အခက်ခဲဖြစ်နေကြတဲ့ Foodpanda မှ Delivery သမားတွေကိ စားစရာများလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေဒွေး